ကမ္ဘာ့စံချိန် တင် ငစားကြီး (၁၀) ယောက် | yathar Magazine
Unicode ဒီတပတျမှာ တော့ ကမ်ဘာစံခြိနျတငျ အစားသမား ၁၀ ယောကျ အကွောငျးကို တငျဆကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုတှေ စားပီးစံခြိနျတငျခဲ့ကွသလဲ တူတူ ကွညျ့ရအောငျ….
ကမ်ဘာအစားဘုရငျ ဘှဲ့ ကို Joey ဟာ 2007 July 4th Nathan’s Coney Island Hot Dog Eating Contest မှာ Japanese legend Takeru Kobayashi ကို ကြျောဖွတျပီး ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Hot Dog 66 ခု ကို 12 Minutes အတှငျး စားပွခဲ့တာပါ။
The ACME Oyster House championship ပှဲမှာ Bugger 85 ခုစားပီး Deep Dish ဆိုတဲ့ နာမညျကို ရခဲ့တဲ့ Patrick ဖွဈပါတယျ။ Sandwich စားတဲ့ နရောမှာ လညျး ဆရာကွီးပဲ။
Takeru “ Tsunami” Kobayashi
အစားဘုရငျ ရဲ့ အစဉျအလာ ပွိုငျဖကျဖွဈတဲ့ Takeru ဟာ လညျး အစားနဲ့ ပတျသကျ ရငျ တျောတျောကွီး တော့ ခသေူမဟုတျပါဝူး။ 2008 မှာ သူဟာ Hot Dog 59 ခုကို 12 မိနဈ အတှငျး စားပွခဲ့တာပါ။ သူလညျး အစားကွီး ပဲ။
Tim “ Eater X” Janus
Tim Janus ဟာ International Federation of Competitive Eating’s Rookie ပှဲက ကြျောကွားတဲ့ သူပါ။ အစားပွိုငျပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စံခြိနျတှေ အမြားကွီး ရထားတဲ့ သူဖွဈပါတယျ။ tamales 71 ခု ကို 12 မိနဈ အတှငျးစားခဲ့ပါတယျ။ Ramen Noodles 10.5 Lb ကိုလညျး 8 မိနဈနဲ့ စားပွထားတဲ့ ဆရာကွီးပဲ။
“ Humble” Bob Shoudt
Bob ဟာ အစားအသောကျ ပွိုငျပှဲ တှေ ထဲက ထငျရှားတဲ့ one of the IFOCE’s top competitive ထဲက ကြျောကွားသူတယောကျပါ။ 9.25 lbs. ရှိတဲ့ shoefly pie ကို 8 minutes အတှငျး၊ 7.6 Lb ရှိတဲ့ meatballs ကို 12 minutes ၊ 25 hot dogs ကို 12 minutes အတှငျး စားသောကျပွခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
Sonya “ Black Widow” Thomas
Sonya ဟာ အမြိုးသမီးတှေ ထဲက အစားအသောကျဘုရငျပါနျော။ ၁၁ ပေါငျ ရှိတဲ့ cheesecake ကို ၉ မိနဈ အတှငျး စားပွနိုငျသူဆိုရငျ အံ့သွစရာပဲ။ အစားဘုရငျတှေ ကွားထဲက မိနျးခလေး ဖွဈလို့ Black Widow” ဆိုတဲ့ နာမညျ ကို ခံယူခဲ့ပါတယျ။
အဆငျ့မွငျ့ အစားပွိုငျပှဲ ဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ Hall Hunt ဟာ အနညျးဆုံး Burgers 60 ခု စားနိုငျတဲ့ ပွိုငျပှဲ ဝငျတယောကျအဖွဈ အဆငျ့7နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
တရုတျနိုငျငံဖှား Juliet Lee ဟာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျးပီး 2008 Coney Island hot dog contest မှာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျကာ ဒုတိယနရော ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
Tim “ Gravy” Brown
အသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ Tim ဟာ ကမ်ဘာ အစားအသောကျ စံခြိနျကို 10 ကွိမျတိတိ ရိုကျခြိုးခဲ့ တဲ့ အကွီး စား Foodies ကွီးဖွဈပါတယျ။ အစား အသောကျ လကေ့ငျြ့ခနျး မြား ပွုလုပျရခငျြးကို နှဈသကျသူ တယောကျပါ။ နံပါတျ စဉျက တော့ ၉ ပါ။
Richard “ The Locust” LeFevre
Heavy Foodies တှထေဲမှာ အသကျကွီးပမေဲ့ မပကျြစီးသေးတဲ့ တယောကျ ဆိုရငျ
Richard လို့ပွောပါရစေ။ သူ အသကျ ၆၀ ပွညျ့မှေးနေ့ မှာ ၅ပေါငျရှိတဲ့ မှေးနေ့ ကိတျကို
၈ မိနဈတှငျး ကုနျအောငျစားပွ နိုငျ တယျဆိုတာ တျောတျောကွီးကို မလှယျကူတဲ့ စံခြိနျပါ။
သူကတော့ အဆငျ့ ၁၀ နရော မှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
Yathar application download link(https://s.yathar.com/apps)
ဒီတပတ်မှာ တော့ ကမ္ဘာစံချိန်တင် အစားသမား ၁၀ ယောက် အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ စားပီးစံချိန်တင်ခဲ့ကြသလဲ တူတူ ကြည့်ရအောင်….
ကမ္ဘာအစားဘုရင် ဘွဲ့ ကို Joey ဟာ 2007 July 4th Nathan’s Coney Island Hot Dog Eating Contest မှာ Japanese legend Takeru Kobayashi ကို ကျော်ဖြတ်ပီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Hot Dog 66 ခု ကို 12 Minutes အတွင်း စားပြခဲ့တာပါ။
The ACME Oyster House championship ပွဲမှာ Bugger 85 ခုစားပီး Deep Dish ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရခဲ့တဲ့ Patrick ဖြစ်ပါတယ်။ Sandwich စားတဲ့ နေရာမှာ လည်း ဆရာကြီးပဲ။
အစားဘုရင် ရဲ့ အစဉ်အလာ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Takeru ဟာ လည်း အစားနဲ့ ပတ်သက် ရင် တော်တော်ကြီး တော့ ခေသူမဟုတ်ပါဝူး။ 2008 မှာ သူဟာ Hot Dog 59 ခုကို 12 မိနစ် အတွင်း စားပြခဲ့တာပါ။ သူလည်း အစားကြီး ပဲ။
Tim Janus ဟာ International Federation of Competitive Eating’s Rookie ပွဲက ကျော်ကြားတဲ့ သူပါ။ အစားပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စံချိန်တွေ အများကြီး ရထားတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ tamales 71 ခု ကို 12 မိနစ် အတွင်းစားခဲ့ပါတယ်။ Ramen Noodles 10.5 Lb ကိုလည်း 8 မိနစ်နဲ့ စားပြထားတဲ့ ဆရာကြီးပဲ။
Bob ဟာ အစားအသောက် ပြိုင်ပွဲ တွေ ထဲက ထင်ရှားတဲ့ one of the IFOCE’s top competitive ထဲက ကျော်ကြားသူတယောက်ပါ။ 9.25 lbs. ရှိတဲ့ shoefly pie ကို 8 minutes အတွင်း၊ 7.6 Lb ရှိတဲ့ meatballs ကို 12 minutes ၊ 25 hot dogs ကို 12 minutes အတွင်း စားသောက်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Sonya ဟာ အမျိုးသမီးတွေ ထဲက အစားအသောက်ဘုရင်ပါနော်။ ၁၁ ပေါင် ရှိတဲ့ cheesecake ကို ၉ မိနစ် အတွင်း စားပြနိုင်သူဆိုရင် အံ့သြစရာပဲ။ အစားဘုရင်တွေ ကြားထဲက မိန်းခလေး ဖြစ်လို့ Black Widow” ဆိုတဲ့ နာမည် ကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် အစားပြိုင်ပွဲ ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Hall Hunt ဟာ အနည်းဆုံး Burgers 60 ခု စားနိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲ ၀င်တယောက်အဖြစ် အဆင့်7နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဖွား Juliet Lee ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်းပီး 2008 Coney Island hot dog contest မှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကာ ဒုတိယနေရာ ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Tim ဟာ ကမ္ဘာ အစားအသောက် စံချိန်ကို 10 ကြိမ်တိတိ ရိုက်ချိုးခဲ့ တဲ့ အကြီး စား Foodies ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစား အသောက် လေ့ကျင့်ခန်း များ ပြုလုပ်ရချင်းကို နှစ်သက်သူ တယောက်ပါ။ နံပါတ် စဉ်က တော့ ၉ ပါ။
Heavy Foodies တွေထဲမှာ အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးတဲ့ တယောက် ဆိုရင်
Richard လို့ပြောပါရစေ။ သူ အသက် ၆၀ ပြည့်မွေးနေ့ မှာ ၅ပေါင်ရှိတဲ့ မွေးနေ့ ကိတ်ကို
၈ မိနစ်တွင်း ကုန်အောင်စားပြ နိုင် တယ်ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို မလွယ်ကူတဲ့ စံချိန်ပါ။
သူကတော့ အဆင့် ၁၀ နေရာ မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။